နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ ရှီနာဂါဝါက မြန်မာသံရုံးရှေ့မှာ ၂၀၁၈၊ အောက်တိုဘာ ၈ ရက်နေ့က ဂျပန်ရောက် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ ဆန္ဒပြကြစဉ်
Photo: Maung Tun Wai
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ ရှီနာဂါဝါက မြန်မာသံရုံးရှေ့မှာ ဂျပန်နိုင်ငံရောက် ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ၇၀ လောက် စုပေါင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်း ဆန္ဒပြရာမှာပါဝင်တဲ့ ကိုသော်ဇင်ဖြိုးက RFA ကို ပြောပါတယ်။
ဆန္ဒပြသူ အများစုဟာ နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှုနဲ့ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ ဒေါက်တာ အေးမောင်ကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်မတော် AA ကို ထောက်ခံကြောင်း တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီနေ့ဆန္ဒပြပွဲကို တရားဝင် ခွင့်ပြုချက်ရယူခဲ့ပြီး မြန်မာသံရုံးရှေ့မှာ ၁ နာရီကြာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်သလို ဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့က လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီဆန္ဒပြပွဲကို ဂျပန်ရောက် နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတချို့ သွားရောက်စောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီး မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ ကြိုးစားရာမှာ အနီးကပ် ရိုက်ခွင့်မရပဲ အဝေးကနေသာ ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်ပေးခဲ့ကြောင်း ဆန္ဒပြပွဲကို သွားရောက်စောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့ ကိုထွန်းဝေက RFA ကို ပြောပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ခရီးစဉ်အတွင်း အခုလို ဆန္ဒပြတာကို ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား တချို့က လက်မခံကြဘူးလို့လည်း ကိုထွန်းဝေက ပြောပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ၁၀ ကြိမ် မဲခေါင် - ဂျပန် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ဖို့နဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးဖို့ ဂျပန်နိုင်ငံကို ၆ ရက်ကြာ ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
They want asylum in Japan. This is old trick. All due respect, you won't get it this time.
Oct 09, 2018 02:35 AM